Ọkachamara Semalt: Ihe Ndị Kwesịrị Ekwesị Banyere SEO
Mgbe onye na-arụ ọrụ n'ịntanetị, ọ ga-achọpụta na ọ gaghị ekwe omume ịmepụta ọdịnaya bara uru site n'ịdabere na otu nkwekọrịta ma ọ bụ nkwenye. Na mgbakwunye na nke a, ọ dịghị ihe ngwọta pụrụ iche maka nsogbu ndị a na-eme na ntanetị. Otu ihe a na - emetụta ahia ahia . Iji melite okporo ụzọ na ndị ahịa na-aga ahịa na saịtị, ndị nwe saịtị ga-ebuli ọdịnaya ha iji mezuo nke a, karịsịa ma ọ bụrụ na ha chọrọ ka ndị mmadụ nyocha ọtụtụ nyocha n'otu oge.
Ọ dị mkpa ịkwado creativity na ozi bara uru iji weghachi ya - find your lost super free. Ihe ndị a bụ ndepụta nke isii SEO, nke Ivan Konovalov, ọkachamara nyere, nke a ga-eme ka ahịa nwee ihe ịga nke ọma:
Nwepụ-na peeji nke SEO
E nwere isi ihe abụọ nke ihe ịga nke ọma SEO mgbasa ozi : na-adọta njikọ na saịtị ahụ, ma na-eme ọdịnaya na posts dị na isiokwu na ahịrịokwu nke ndị ọrụ ntanetị chọọ na search engine . A na-akpọ ihe ndị a dịka njikarịcha na ibe na ibe na ibe..Ihe mbụ ị ga-eme na SEO bụ ijide n'aka na ọdịnaya dị na saịtị ahụ dị mkpa maka ihe ndị na-ege ntị nwere mkpa ma ọ bụrụ na saịtị ahụ bụ ịkwado ọkwa maka isiokwu. Dị ka ọ na-eweta ụfọdụ okporo ụzọ, ọ na-enweta gị nnọọ. Usoro nke abụọ bụ ịmepụta ọdịnaya nke ndị ọzọ nwere ike ịchọta uru ruo n'ókè ha chọrọ ijikọ ya. Njikọ ndị a dịka ntuli aka nke obi ike na iwelie ikwenye ntụkwasị obi.
Nnyocha ọchụchọ kwa ọnwa
Ebe mbụ ndị ahịa ọhụrụ ga-anụ banyere saịtị ma ọ bụ akara bụ site na weebụ. Ọ bụrụ na enweghị njikarịcha ebe nrụọrụ weebụ na-ewere ọnọdụ iji jide ọdịmma ndị dị otú ahụ, mgbe ahụ, saịtị ahụ ga-abụ na ọ gaghị adị n'obi ha.
Isiokwu aha okwu
Ọhụụ, ma ọ bụ ezughị oke, ọtụtụ ndị ahịa na-eme abụghị ịnwe akara aha dị egwu na njirimara search engine . Ọ dị mkpa ịnweta ihuenyo aha maka ichebara aha mgbe ị na-ekepụta ọdịnaya dị mkpa. Ọ bụ ihe SEO nke na-ejikwa isiokwu na nkebi ahịrịokwu ndị nkịtị na-eji ndị na-eji engines ọchụchọ.
Nkọwa dị iche iche na-eme ka ọnụọgụ
Nkọwa okwu meta kwesịrị ịdị ma ọ dịkarịa ala ihe odide 155. Ọ bụ nkowa nkowa nke ihe onye ọrụ kwesịrị ịtụ anya mgbe ha pịa njikọ nke engine search. Ijide n'aka na ebe nrụọrụ weebụ nwere nkọwa nkọwa dị mfe, ma ọ bụ na-eme ka mmadụ kwenye, na-eme ka ohere nke ndị ọbịa na-abanye na ya. Jide n'aka na ị nwere nkọwa pụrụ iche pụrụ iche nke ọ bụla maka ibelata ohere ịpị ka ọ na-eme ka ebumnobi maka okwu yana ọdịmma.
Ihe ise kachasị elu nweta 75% nke clicks
Ndị nwe ebe obibi kwesịrị ịghọta na onye ka elu dị elu na ibe nsonaazụ ọchụchọ, ọnụ ọgụgụ dị elu nke clickthroughs a na-atụ anya. Gbalịa na-eche nche ahịa mgbe niile na ọtụtụ okwu bara uru ma mezie ọdịnaya dị mkpa maka okwu ndị a maka ohere na 75.7% click-through rates.